MacPaw Mepere New Mac Museum na Kiev, Ukraine | Esi m mac
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado Apple na ngwaahịa ya, ị na-echekwa ị na-aga njem n'oge ezumike na-esote, Ukraine nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma, yana karịa Kiev isi obodo ya. Ọ bụghị naanị n'ihi na ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịbendị na ịma mma nke obodo a mara mma n'etiti ọdịbendị Europe na ọdịbendị Russia, kamakwa n'ihi na enwere ọfịs nke MacPaw, ụlọ ọrụ na-etolite ngwa ndị ama ama maka Mac, bụ nke maliterela mepee ọhụụ Mac Museum na-emeghe onye ọ bụla chọrọ ileta.
Emeghe ụlọ ọrụ gọọmentị ọhụrụ nke Mac Museum na Kiev (Ukraine) mere ụnyaahụ, Tọzdee, Mee XNUMX na etiti ehihie; Ebumnuche ya abụghị ikpokọta ngwaahịa ndị na-enweghị isi na-agụpụta, mana iji "kpalie ndị ọrụ aka na ụmụaka" site na nchịkọta "relics" nke bụ njem site n'akụkọ ihe mere eme nke Mac na Apple.
1 A Mac Museum iji kpalie mmụọ
1.1 Nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke Mac Museum
A Mac Museum iji kpalie mmụọ
Ikekwe ọtụtụ n'ime gị anaghị ada ụda aha MacPaw nke ọma, agbanyeghị, ọ bụrụ na m kpọtụrụ "Clean My Mac", "Gemini" ma ọ bụ "Setapp", ihe gbanwere. N'ezie, MacPaw bụ ụlọ ọrụ sitere na Ukraine nke raara nye mmepe nke ngwa maka macOS dị ka ewu ewu ma jiri ya dịka ndị m kwuru. Ma ugbu a, ọ bụ ọrụ ya ekpebie itinye ego ụfọdụ n'ime uru ha na -ekwupụta ọdịnala Mac nye umu akwukwo, ndi mmepe na onye obula choro ya. N'ihi nke a, ụnyaahụ na ụlọ ọrụ MacPaw dị na Kiev (Ukraine) ọhụrụ Mac Museum.
Lelee vidiyo nkwado a dị mkpirikpi, mgbe ahụ, m ga-agwa gị nkọwa niile metụtara ihe osise dị egwu.
Nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke Mac Museum
N’ọnwa Ọgọstị nke afọ gara aga, ọ gbagoro maka ahịa nchịkọta vintage Apple akụrụngwa nke Tekserve nwere. Maka ndị na-amaghị, Tekserve bụ ụlọ ọrụ nrụzi akụrụngwa Mac maka na, kemgbe 1987, nọ na-ejere ndị New York ozi na ọnọdụ ya na Manhattan. Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ (afọ 29) Tekserve ghọrọ akara ngosi, "ụlọ ahịa Apple mbụ," yabụ mmechi ya mere ka ndị ahịa na ndị ọrụ nwee nnukwu mmetụta.
Tekserve debere a ịtụnanya collection nke ochie Mac kọmputa otu n'ime ha bụ CXT CX, 20th Anniversary Mac; mbụ iMac, iBook 1994, PowerMac G4, PowerBook G4 na aluminom, iBook, Powerbook 12-inch, eMac, iMac G5, Powerbook G3 na a Macintosh 128k nke Steve Wozniak bịanyere aka na ya. Dị ka ndị na-ahụ maka MacPaw gosipụtara, nke ọ bụla n'ime ihe ndị a na ihe ndị ọzọ dị na nchịkọta ahụ "na-anọchite anya akara ngosi dị na mmalite nke Mac na imewe na teknụzụ."
Mgbe anakọtara nchịkọta a n'oge ọkọchị, MacPaw zoro nchịkọta a na nzuzo na ntanetị "Na-adịghị ahụkebe nke Iconic Apple Computers" site Tekserve maka ngụkọta nke $ 47.000. N’ime izu ole na ole, ebuputara nchịkọta ahụ na New York na Kiev n’echiche nke ịmepụta Mac Museum na ọfịs ya.
The MacPaw Museum bụ ya mere ihe nnabata nke ụlọ ọrụ, na-eme ka ọ dị iche iche na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Nnukwu ihe dị iche, n'agbanyeghị nha ya, bụ nke ahụ Emegheghi ọhaneze, ụlọ ọrụ na-ahazi ihe na-arụkarị n'ọfịs ya ka ndị ọbịa na ndị na-enyere ya aka nwee ike ịga leta ya. Ọzọkwa, MacPaw nwekwara na-ahazi "njegharị" maka ụmụaka "ịhụ nchịkọta Mac ma nweta mmụọ nsọ".
Taa, na MacPaw Museum nke Mac mejupụtara a ngụkọta nke Isiokwu 70, 40 nke sitere na Nchịkọta Tekserve Mac. Nchikota ndi ozo gunyere ihe ndi MacPaw nweburu dika:
Nchịkọta zuru ezu nke ụdị iPhone niile (ruo ugbu a).
Nchịkọta akwụkwọ mmado «Che iche”.
Akwụkwọ «Ekere Apple na California».
Igodo mbụ ejiri kọwaa koodu ngwa CleanMyMac.
Oleksandr Kosovan, onye isi na onye guzobere MacPaw na Setapp CEO, kwuru na Companylọ ọrụ ahụ enweghị ike ịmalite ma ọ bụ dịrị na-enweghị Apple na ọdịbendị na-akpali akpali ya, nke mere na ha malitere ịchịkọta ihe apụl, dị ka ụtụ nke mmasi nye atụmatụ na echiche Apple. “Apple gbanwere ndụ m n'ọtụtụ ụzọ. N'ịbụ onye ọhụụ Steve kpaliri maka ngwaahịa dị mfe, nke ka mma, enwere m ike imejuputa echiche ndị a na mmepe ngwaahịa anyị. Enweghị m ike ịsị na daalụ Apple ka ọ kwụọ nnukwu ụtụ a maka akụkọ ihe mere eme nke ngwaahịa Apple mgbe ochie. "
Nchịkọta ahụ “mepere” n’echiche MacPaw na-anabata onyinye nke kọmputa na akụrụngwa nke ndị ọrụ ahụ niile chọrọ ịhụ ụdị ngosi ha pụrụ iche.
Ma ebe ọ bụ na imirikiti n'ime anyị agaghị enwe ike ịga Kiev iji nwee mmasị na Museum a, ana m ahapụrụ gị ọtụtụ ihe osise nke enyere m site na MacPaw. Daalụ Julia!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » MacPaw Mepere New Mac Museum na Kiev, Ukraine
Amazon Prime ga-ekwuwapụta maka Apple TV na WWDC ọzọ